About Us-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co, Ltd.
Uri pano: Imba>Nezvedu
Senyanzvi muongorori, mugadziri uye muchengeti, Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Limited Corporation mumwe wevanotungamira vanogadzira marokwe eheather muChina. Isu tinoshandira mumunda wekupa zvigadzirwa zvekudzivirira eziso kune welding process, zvinosanganisira kupeta magirazi, yakagadziriswa mumvuri welding helmet, simba remhepo kuchenesa respirator uye fittings.
Nedzidzo yepamusoro yesainzi, kugadzira uye kuyedza michina, kambani yedu ndeimwe yemakambani anotungamira anodzidza uye kugadzira zvigadzirwa zvakakodzera munyika medu. Isu tinosimbirira pane zvesainzi uye tekinoroji nyowani uye yakazvimirira yekutsvaga nekuvandudza. 20% yevashandi mukambani yedu inyanzvi, iri timu yehunyanzvi kudada nayo. Zvigadzirwa zvedu zvasvika padanho repamusoro soro.
Kambani yedu inovavarira kuenderera nekuvandudza ruzivo uye kukunda-kuhwina kushandira pamwe nevatengi. Isu tinofanirwa kupa zvigadzirwa zvepamusoro uye masevhisi nekutendeseka kukuru uye kushingairira.
MX-9 Auto Yakasviba Yakasheedzera Helmet nemheni
Kuvimba kwako ndiyo simba redu guru rekutyaira kuti tifambire mberi, ndapota tivimbe nesu zana.
Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co, Ltd., iri muNantong City, Jiangsu Province, bhizinesi resainzi-iro rezvehunyanzvi, iro rinoshanda mukugadzira, kugadzira, uye kutengesa zvigadzirwa zvemagetsi. Zvigadzirwa zvikuru: auto kusviba welding masks, zviridzwa, shunts, Stud welder uye zvigadzirwa zvaro nezvimwewo.
Vashoma pane 5 Vanhu
0% Kurumidza Kupindura Rate
3000 - 5000 mativi mativi